၂၀၂၁ မှ ၂၀၂၂ ရာသီအတွင်းအားကစားကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲ။ အ | Gadget သတင်းများ
Diego Lopez | 09/09/2021 14:53 | ယေဘုယျ
စက်တင်ဘာလသည်အားကစားအများစု၌ပင်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်ခြင်းနှင့်တူသည်။ အားကစားပြိုင်ပွဲများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏ရာသီအလိုက်စတင်သည် (သို့) ၎င်းအားဆက်လုပ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းဘာကိုမှလက်လွတ်မခံနဲ့ ၂၀၂၁/၂၂ ရာသီ၌အဓိကအားကစားပြိုင်ပွဲများကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သော Gadget သတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်.
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဟာသြဂုတ်လရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်မှာဘောလုံးပွဲကိုစကြည့်တယ်။ ပြက္ခဒိန်တွင်ရက်စွဲကိုရွှေ့စေသောခြွင်းချက်တစ်ခုသာရှိသည်၊ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က COVID နှင့်ဖြစ်သည်။ ဤရာသီသည်ကပ်ရောဂါ၏အကြွင်းအကျန်များရှိနေသေးသော်လည်းအနည်းအကျဉ်းသာရှိသည်။ အားသာချက်ရှိသောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုသည်အများပြည်သူအားအားကစားကွင်းသို့ပြန်လာခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုတ်ကဲ့၊ လောလောဆယ်၊ အကန့်အသတ်နဲ့ဘဲ။
ထို့ကြောင့်သင်လက်မှတ်မ ၀ ယ်သောသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းတို့ပြောသမျှသောနှုန်းထားများဖြင့် LaLiga ကိုတီဗီတွင်ကြည့်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ဆွမရ။ ဒီနှစ်မှာမနှစ်ကညီမျှခြင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါလုပ်တယ်။ Movistar နှင့် Orange တို့သည်သူတို့၏ပေါင်းစည်းထားသောအထုပ်များမှတဆင့်ဘောလုံးကြည့်နိုင်သည်Fusion နှင့် Love နှုန်းတို့အသီးသီးရှိကြသည်။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် ဘတ်စကက်ဘောဒါဟာယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်ပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။ တစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ဥရောပပြိုင်ပွဲ Euroleague၊ ဘတ်စကက်ဘောချန်ပီယံလိဂ် (သို့) Eurocup ကဲ့သို့သင်မြင်နိုင်သည် DAZN မှတဆင့်; Endesa League နေစဉ်Movistar ၌ ဒီချန်ပီယံရဲ့ရုပ်သံလွှင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကဘယ်သူလဲ။
မော်တာတွင် Queen ပြိုင်ပွဲများသည် Formula 1 နှင့် MotoGP တို့ဖြစ်သည်မရ။ ထိုချန်ပီယံများသည်လအနည်းငယ်သာရှိသေးသော်လည်းနောက်ဆုံးရိုက်ချက်များကိုသင်အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ အမှန်တော့မင်းစီးတာမှန်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် ရာသီလက်ကျန်တစ်ဝက်ကိုလုံးဝအခမဲ့ကြည့်ပါမရ။ အကြောင်းပြချက်မှာ DAZN သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိထုတ်လွှင့်ပိုင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပြီးအခမဲ့အစမ်းသုံးကာလတစ်လရှိသည်။ သင်နှစ်သက်သောအရာပေါ် မူတည်၍ ပလက်ဖောင်းသို့လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Movistar သည် DAZN နှင့်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်အပြာရောင်အော်ပရေတာမှတဆင့်အင်ဂျင်ပါဝါကိုသင်မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Fusion နှုန်းထားများ (Fusion Plus နှင့် Fusion Total Plus4လိုင်းနှစ်ခု) တွင်ထည့်သွင်းထားသော Motor TV အထုပ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ကျန် Fusion နှုန်းများတွင်၊ သင်အထုပ်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုမိုမြင့်မားစွာပေးဆောင်ရမည်။
အီတလီနိုင်ငံ Trento မြို့တွင်ဥရောပစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကိုစက်ဘီးစီးလျက်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာဒီအားကစားကိုဝါသနာပါရင် DAZN မှတဆင့်စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲအားလုံးကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်မရ။ ပလက်ဖောင်းတွင်စက်ဘီးစီးသူတိုင်းအတွက်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရှိသော Eurosport ချန်နယ်နှစ်ခု (Eurosport 1 နှင့် Eurosport 2) နှစ်ခုရှိသည်။ အမှန်တော့ဟိ Eurosport channel 1 သည် Orange, Vodafone သို့မဟုတ် Virgin Telco ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများအတွင်းတွင်လည်းရှိသည်.
ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိပါတယ် Yoigo, Movistar, Guuk သို့မဟုတ်MásMóvilကဲ့သို့အော်ပရေတာများနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုကြည့်ပါမရ။ ဤကိစ္စတွင် DAZN နှင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းများကိုတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းနှင့်အခြားအရာများတွင်ထည့်သွင်းပါကပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးချေရပါလိမ့်မည်။
တင်းနစ်ကစားခြင်းသည်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်တူသည်မရ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပြိုင်ပွဲပေါ်မူတည်ပြီးမင်းကိုတစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာမှာရလိမ့်မယ်။ Grand Slam လေးခု (Roland Garros, US Open နှင့် Australian Open) တို့တွင်သုံးမျိုးကို Yoigo, MásMóvil, Gukk, Movistar, Orange, Vodafone သို့မဟုတ် Virgin Telco နှင့် DAZN ကဲ့သို့အော်ပရေတာများတွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Movistar ၌ Wimbledon သည်ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို ၀ ယ်ယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ မာစတာ ၁၀၀၀၊ ၅၀၀ နှင့် ၂၅၀ ကဲ့သို့သောအဆင့်နိမ့်ပြိုင်ပွဲများတွင်အမျိုးသားများကို Movistar ၌၎င်း၊ DAZN ၌အမျိုးသမီးများကိုမြင်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » ဒီရာသီအားကစားကိုဘယ်မှာကြည့်မလဲ။
iPhone 13 နှင့်၎င်း၏ Keynote တွင် Apple တင်ပြခဲ့သောအရာအားလုံး